Waajjirri Caffee Oromiyaa hooggansaafi hojjettoota isaa waliin Qophii Karoora Waggaa Bara 2012 irratti Magaalaa Adaamaatti mari'achaa jira.
CAFFEE - (Hagayya 16 Bara 2011):
Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Kab. Addee Loomii Badhoo waltajjii kanarratti argamuun haasawaa gabaabaa taasisaniin, boqonnaa qophii karooraa kana keessatti hojii keenya wayita karoorfannu, hojiilee Caffeen raawwachuu qabu isaan ijoofi xiyyeeffannoo argachuu qaban, jijjiirama keessa jirru galmaan gahuuf hojii hordoffiifi to'annoo qaamolee mootummaaf manneen hojii waliin gaggeessinu karaa komii uummataafi rakkoolee bulchiinsa gaarii hiikuuf nu dandeessisaniin irratti karoorfannee hojjechuu kan qabnu ta'a jedhan.
Gama biraan immoo, barri kun, Caffeefi Manneen Maree Ummataa bara hojii isaanii xumuuruuf waggaa dhumaarra kan jiran yommuu ta'u, hojiiwwan waggoota arfan darban keessatti hojjetamaniifi bu'aawwan argaman akka galteetti fayyadamnee kanneen xiyyeeffannoo barbaadan immoo addaan baasnee yeroo nu hafe keessatti xiyyeeffannoo olaanaa kenninee hojjechuuf yeroo itti qophoofnudha jedhan Aaddee Loomiin. Mariin hooggantootaafi hojjettoota Waajjira Caffee waliin qophii karoora waggaa bara 2012 irratti gaggeeffamaa jiru kun guyyoota lamaaf kan itti fufu ta'a.
Toorbee kana 4236
Ji'a kana 12212
2008 irraa eggalee 3783192